Thwebula Adobe AIR 32.0.0.125 – Windows – Vessoft
Ikhasi elisemthethweni: Adobe AIR
I-Wikipedia: Adobe AIR
Adobe AIR – a isofthiwe ukugijima izicelo nge support for ubuchwephese obehlukahlukene kudingekile ukuba phaka web-izicelo. Isofthiwe ikuvumela ukuba phaka izicelo ezingafaneleki kuhlobene kanjani nokulinganiselwa ezihambisana nokusetshenziswa iziphequluli. Adobe AIR isekela izicelo eziningi, kuhlanganise alalelwayo video abadlali, imidlalo, amathuluzi ukuze kwandiswe umkhiqizo, njll Futhi Adobe AIR zokusebenza usebenze ngaphandle uxhumano inthanethi ngokuthumela ukubhalwa kwemininingwane eqoqwe ngenkathi inqubo working okwamanje uxhumano lwe-inthanethi.
Usekela ukusetshenziswa amafasitela multiple
Ukufinyelela kwezicelo isistimu yefayela bese ibhodi yokunamathisela
Thwebula Adobe AIR
I-Adobe Creative Cloud – isoftware yokulanda nokuvuselela imikhiqizo yakwa-Adobe. Futhi, isoftware ikhombisa imininingwane eningile mayelana nezinhlelo zokusebenza ezitholakalayo zokulanda.
I-Adobe Photoshop – isoftware enamandla yanoma yiluphi uhlobo lokuhlelwa kwesithombe nokwakhiwa kwewebhu isethi ehlaba umxhwele yamathuluzi ahlukene nemisebenzi.
I-Adobe Acrobat Reader – isoftware yokubuka nokuphrinta amafayela e-PDF anamathuluzi wengeze amazwana emibhalweni futhi axhumana nokugcinwa kwamafu.
Ithuluzi ukudlala multimedia kanye lokuqukethwe in the internet. Isofthiwe kakhulu wenabisa amathuba iziphequluli popular.
Amazwana ku Adobe AIR
Adobe AIR software ehlobene
I-DirectX – iphakethe lezicelo zokusebenza ngempumelelo kwamafayili emidiya nemidlalo. Isoftware ithinta ukucubungula kwezinto ezinemifanekiso, ukusakazwa komsindo, nokwenza kahle imidlalo.
I-Macrium Reflect – isoftware yokusekelayo yonke idiski yakho noma idatha ehlukile. Isoftware isekela izinga eliphakeme lokucindezelwa nokuqoshwa.
I-Auslogics BoostSpeed – ithuluzi elilula lokwengeza, lokuhlanza nokulungisa amaphutha ohlelweni lokusebenza. Isoftware ivumela ukwenza ukuqaliswa okusheshayo kwemidlalo nokusetshenziswa.
Isofthiwe ukubuka ulwazi olugcwele mayelana nesakhiwo ifayela a hard disk nokwandisa isikhala disk. Isofthiwe inikeza ezahlukeneyo eziningana ukubonisa izinhlaka okuqukethwe kwi disk.
Lesi isithunywa esithandwayo somyalezo osheshayo, ukudluliswa kwefayela, ukuxhumana kwezwi nevidiyo.
Xhuma i-Hotspot – isoftware yokwenza i-router ebonakalayo kukhompyutha yakho. Isoftware ikhombisa imininingwane enemininingwane yokusetshenziswa kwethrafikhi yendawo yokufinyelela ku-inthanethi.
UMaxima – iqoqo lamathuluzi wokuhlanganisa noma wokubala nokwakhiwa kwamagrafu. Isoftware ikuvumela ukuthi usebenze nezinhlobo ezahlukene zokubala.